लक्ष्मी लघुवित्तको साधारण सभाद्धारा २६ प्रतिशत लाभांश पारित | गृहपृष्ठ
Home लगानी लक्ष्मी लघुवित्तको साधारण सभाद्धारा २६ प्रतिशत लाभांश पारित
लक्ष्मी लघुवित्तको साधारण सभाद्धारा २६ प्रतिशत लाभांश पारित
मङ्सिर ३, काठमाडौं (अस) । आइतवार लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छैटौं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष अजय विक्रम शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभाले २६ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । गत आवको नाफाको आधारमा कम्पनीले चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत वोनस शेयर र १६ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले लाभांश वितरण गरे पश्चात चुक्तापूँजी रू.२४ करोड २० लाख पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ । मङ्सिर ३ गते अग्रवाल भवन कमलादीमा भएको साधारण सभामा बोल्दै सदस्यहरुले आगामी दिनहरुमा अझै प्रगति गर्दै जान सुझाब दिएका छन् ।
२०६८ साल फागुन २३ गते ‘घ’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पाएको यस कम्पनीमा लक्ष्मी बैङ्कको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म ३९ जिल्लामा ५४ ओटा शाखा कार्यायबाट ५८ हजारभन्दा बढी ग्राहक सदस्यलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनहरुमा थप १० ओटा शाखा विस्तार गरि कार्यालय स्थापना गर्ने सभाका अध्यक्षले बताएका छन् । लक्ष्मी बैङ्कको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको यस लघुवित्तले कृषि, पशुपालन सेवा व्यवसाय तथा लघु उद्यम जस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गर्दै महिलालाई केन्द्रीत गरेर सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा चुक्तापूँजी रू. २४ करोड २० लाख पुर्याएको छ । नाफा रू. २ करोड २५ लाख कमाएको छ भने जगेडा कोषको रकम रू. १३ करोड ४१ लाख पुगेको छ । कम्पनीको पहिलो त्रैमासमा खुद ब्याज आम्दानी रू. १० करोड र सञ्चालन मुनाफा रू. ३ करोड पुगेको छ । कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक रू. ३७ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ ।